चर्को आलोचना भएपछि हिसिला यमीलाई बचाउन लेखेको स्टाटस करिश्माले डिलिट गरिन्? – Complete Nepali News Portal
चर्को आलोचना भएपछि हिसिला यमीलाई बचाउन लेखेको स्टाटस करिश्माले डिलिट गरिन्?
April 5, 2017	12,642 Views
नयाँ शक्ति नेपालकी केन्द्रिय सदस्य तथा अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर अहिले सामाजिक सन्जालमा चर्को आलोचना खेपिरहेकी छिन्। आइतबार दिउँसो निर्वाचन आयोगमा धर्ना दिने क्रममा नयाँ शक्ति नेपालकी नेतृ हिसिला यमीले ‘यो देश खारेज गर’ भन्दै लगाएको नाराले सामाजिक संजालमा निकैनै तहल्का मच्चाएको थियो।
हिसिला यमीले ‘देश नै खारेज गर’ भनेर नारा लगाइरहँदा मिडियामा क्याप्चर भएपछि एकैछिनमा भाइरल बन्न पुगेको थियो। जसको चर्को आलोचना पछि हिसिलाले सोमवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफुले अर्धवेहोसीमा त्यस्तो बोलेको भन्दै माफी पनि मागेकी थिईन्। तर यो विषयलाई लिएर करिष्माले मिडियामा आएको भिडियो झुट भएको तथा डविङ गरिएको भन्दै आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस राखेपछि उनी पनि आलोचना खेप्न बाध्य भएकि छिन्।
तर पछि स्टाटस राखेको केही समय नपुग्दै करिस्माले स्टाटस डिलिट गरेकी छिन्। जसबाट उनको स्टाटस झुटो भएको सावित भएको छ्। आखिर पछि हटाउनु थियो भने मिडियालाई गलत भन्दै करिश्माले किन राखिन त स्टाटस? यो भने सोच्न लायक विषय बनेको छ्। – ChannelNp